သောက်ရေအက်ပလီကေးရှင်း - ရေခြေရာခံစက်နှင့်သောက်စရာသတိပေးချက် Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » သောက်ရေအက်ပလီကေးရှင်း၊
သောက်ရေအက်ပလီကေးရှင်း - ရေ tracker & သောက်စရာသတိပေးချက် APK
"သောက်ရေအက်ပလီကေးရှင်း - ရေ tracker & သောက်သုံးမှုသတိပေးချက်" သည်သင်၏နေ့စဉ်သောက်သုံးရေကိုခြေရာခံပြီးသင့်တော်သောရေဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရေသောက်ရမည့်အချိန်ကိုသတိပေးသည်။ ဤနေ့စဉ်ရေသတိပေးချက်သည်သောက်သုံးရေနှိုးစက်နှင့်အခြားအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များမှတစ်ဆင့်ကျန်းမာရေးအလေ့အထများကိုဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ အားလုံးအခမဲ့များအတွက်!
ဒီရေ tracker ကိုကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်သုံးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။
your သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကို Detox
brain ဦး နှောက်စွမ်းအားကိုတိုးစေသည်
အဘယ်ကြောင့် "သောက်ရေအက်ပ်: ရေ tracker & သောက်ရေသတိပေးချက်" ကိုသုံးပါ?
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်မတူဘဲဤသောက်ရေသန့်သည်သင့်အားသတိပေးချက်များ၊ သတိပေးချက်များနှင့်အခြားအရာများကိုအခမဲ့ပေးသည်။ အကန့်အသတ်မရှိစွမ်းဆောင်ရည်များကိုအားသွင်းစရာမလိုဘဲယူပါ။ သင်ရေနှိုးစက်သို့မဟုတ်ရေဂဏန်းတွက်စက်ကိုလိုအပ်သည်ဆိုလျှင်အရေးမကြီးပါ၊ ဤ app မှအရာအားလုံးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်ရရှိနိုင်သောအရာကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
ဤရေဓါတ်ဖြည့်စက်အက်ပ်ရှိရေဂဏန်းတွက်စက်သည်သင်၏အလေးချိန်၊ ကျား၊ မနှင့်လှုပ်ရှားမှုအပေါ် မူတည်၍ သင်၏သောက်သုံးရန်ရည်မှန်းချက်ကိုအလိုအလျောက်တွက်ချက်လိမ့်မည်။ သင်၏တွက်ချက်ထားသည့်ရည်မှန်းချက်သည်သင်နို့တိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်သင်၏ရေချိန်ခွင်လျှာရည်မှန်းချက်ကိုပိုမိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အခြားနောက်ထပ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ဒီနေ့စဉ်ရေသတိပေးချက်သည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစုဆောင်းမှုကို အသုံးပြု၍ အချိုရည်ကိုလျင်မြန်စွာထည့်ပါသို့မဟုတ်အရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်ထူးခြားသော volumes များဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ခွက်ကိုဖန်တီးပါ။
Hydration အက်ပလီကေးရှင်းသည်မတူသောသောက်သုံးရေအမျိုးအစားများအတွက်ရေဓာတ်ပါဝင်မှုအဆင့်ကိုဖော်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူကြိုက်အများဆုံးသောက်စရာများမှာရေချို၊ ရေ၊ လက်ဖက်၊ ကော်ဖီ၊ ဖျော်ရည်၊ နို့၊ ဘီယာ၊
နှစ်သက်သည့်ယူနစ်များကိုရွေးပါ။ imperကရာဇ် (oz) သို့မဟုတ်မက်ထရစ် (ml / dl / cl) ။
🛑 SMART AND CUSTOM သတိပေးချက်များ
ကိုအသာပုတ်ပါ။ တိတ်ဆိတ်ခြင်း၊ တုန်ခါမှုမှတဆင့်၊ ဤရေသောက်သုံးသည့် app တွင်သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းလည်းသတိပေးချက်များကိုအလွယ်တကူခိုးယူနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရေသောက်သုံးမှုသတိပေးချက်သည်သင်၏နေ့စဉ် / အပတ်စဉ် / နှစ်စဉ်အရည်စားသုံးမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဓါတ်တိုးခြင်းဂရပ်များနှင့်ရေစားသုံးမှုမှတ်တမ်းနှင့်အတူသောက်သုံးခြင်းတိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ရာသီဥတုနှင့်ရာသီဥတုသည်သင်၏ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းမှုလိုအပ်ချက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ သင်၏နေ့စဉ်ပစ်မှတ်ကို ပို၍ တိကျစေရန်ဤအချက်အလက်များကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။ အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့၏သောက်စရာလမ်းကြောင်းနှင့်နှိုးစက်သည်သင်အားအခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေသည်။
ရေပိုသောက်ပြီးချစ်စရာရေဘဝဲကိုပျော်ရွှင်စေပါ။ သင်ရေခန်းခြောက်လေလေရေဘဝဲသည်ရေငတ်လေလေဖြစ်သည်။ သင်၏ချစ်စရာကောင်းသောအဖော်သည်သင်၏ဓါတ်တိုးမှုအဆင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ သင်သောက်ရန်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသင်၏ရေဘဝဲသည်တစ်ခုတည်းကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောရေသောက်ခြင်းအလေ့အထသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ပိုမိုကျန်းမာသောအသက်တာကိုဆိုလိုသည်။ ဤရေသောက်သုံးသည့်အရာသည်သင်ကျန်းမာစွာနေရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရေသောက်သုံးမှုသတိပေးချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုကိုသင်တွေ့ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအသစ်များနှင့်အထောက်အကူပြုသောအီးမေးလ်များသည်ဤအခမဲ့ရေအက်ပလီကေးရှင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုပါသည်။ support@listonic.com တွင်ဆက်သွယ်ပါ
မနေ့ကနာရီအပြောင်းအလဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်ပေးစနစ်ကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်။ ငါတို့အတွက်တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ 🙇
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမှားကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ပြီးသင်၏နှိုးစက်များကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမခံလိုပါသည်။ တစ်စုံတစ်ရာသည်သင်ကိုနှောင့်ယှက်နေပါက support@listonic.com သို့ဆက်သွယ်ပါ။
16.02 ကို MB
ကျန်းမာရေးအသုံးချပရိုဂရမ်များ - သောက်ရေသတိပေးချက်၊
WaterMinder - ...